» एलिना गुरुङले जित्लिन् नेपाल स्टार ?
एलिना गुरुङले जित्लिन् नेपाल स्टार ?
९ माघ २०७७, शुक्रबार १४:२१
मकवानपुर, ९ माघ । वाईवाई नेपाल स्टारको फाईनलमा पुगेकी एकमात्र महिला प्रतियोगी एलिना गुरुङको अहिले चारैतिर चर्चा छ । नेपाल स्टारको फाईनलमा पुगिसकेपछि एलिना अहिले देश दौडाहामा छिन् । आफु जन्मिएको स्थान अनि आफुले अध्ययन गरेका विद्यालय र कलेजहरुमा अहिले उनको यात्रा जारी छ । एलिनालाई साथ दिनका लागि उनको गृहजिल्लामा विभिन्न समूह पनि गठन भएका छन् अनि विभिन्न संघसंस्थाले पनि उनलाई सहयोग गरेको छ । उनी अहिले ती सबै संस्थाहरुमा पनि पुगिरहेकी छिन् । उनलाई भव्य स्वागत गर्नेहरुको भिड पनि निक्कै ठूलो छ । नेपालमा हालसम्म भएका गायन रियालिटी शोहरुमध्ये सर्वाधिक पुरस्कार राशीको नेपाल स्टारमा एकपटक पनि बटम लाईनमा नपरि फाईनलसम्म पुग्ने उनी एकमात्र चेली हुन् । यसरी सबैको साथ पाएकी एलिनाले नेपाल स्टार जित्लिन् वा नजित्लिन् ? कृपया तपाईको विचार लेख्नुहोस् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–
हालसम्म बटम थ्रीमा नपरेका आधारमा हेर्ने हो भने एलिनाले नेपाल स्टार जित्नसक्ने सम्भावना ठूलो छ । उनलाई सहयोग गर्ने हातहरु धेरै भएकोले पनि उनले नेपाल स्टारको टाईटलमा कब्जा जमाउन सक्छिन् । वेष्टर्न प्याटर्नका गीतहरुमा तहल्का मच्चाएकी एलिनाका युवा फ्यानहरु पनि धेरै छन् । शान्त र लजालु स्वभावकी एलिनाका प्रस्तुतिहरुलाई दर्शकहरुले पनि रुचाएका छन् । यसर्थ उनले बाजी मार्नसक्ने सम्भावना बलियो छ । एलिना नै नेपाल स्टारमा अवार्ड जित्ने र फाईनलमा पुग्ने एकमात्र महिला प्रतियोगी पनि हुन् । उनले उत्कृष्ट ५ छनौटका क्रममा पफोमर अफ द डे अवार्ड पनि जितेकी थिईन् । नेपाल स्टार जितेमा एलिना गायन रियालिटी शोको पहिलो सिजन जित्ने एकमात्र महिला प्रतियोगी समेत हुनेछिन् । गायन रियालिटी शोहरुमा टाईटल जित्ने एकमात्र प्रतियोगी हालसम्ममा सज्जा चौलागाई हुन् । उनले नेपाल आईडल सिजन ३ जितेकी हुन् । तर एलिनाको सवालमा भने यो अझै ठूलो रेकर्ड हुनेछ ।
एलिना बिगत ५ वर्षदेखि साँगितिक क्षेत्रमा सक्रिय छिन् । सानैदेखि संगीतमा रुचि राख्दै आएकी एलिनाले ५ वर्ष अघि रेष्टुरेन्टमा गीत गाउँदै संगीतको दुनियाँ प्रवेश गरेकी थिईन् । रेष्टुरेन्टमा गाउँदै गरेकी एलिनालाई साथीहरु र परिवारले गीत गाउनसक्छौ भनेर हौसला दिएका थिए । त्यसपछि उनी औपचारिक रुपमा संगीत सिक्नतर्फ लागिन् । संगीत सिक्दै गर्दा ब्याण्डको स्थापना गर्ने सल्लाह भएपछि उनले साथीहरुसँगै मिलेर न्यू मेलोडियस ब्याण्ड स्थापना गरिन् । ब्याण्ड स्थापना भएपछि उनले ब्याण्ड मार्फत नै प्रस्तुतिहरु दिन सुरु गरेकी थिईन् । उनको ब्याण्डले पोखराका विभिन्न सांगितिक जमघटमा सहभागी भएर प्रस्तुतिहरु दिने गरेको छ । न्यु मेलोडियस ब्याण्डले करिब २ वर्षदेखि सांगितिक प्रस्तुतिहरु दिँदै आएको छ । २४ वर्षीया एलिनाका केही ओरिजिनल गीतहरु पनि सार्वजनिक भईसकेका छन् ।